धेरै दिनसम्म रात नपरी २४ घण्टा दिन मात्र हुने देश, जहाँ सुर्य अस्ताउँदैन – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २८, २०७७ समय: १९:४१:१८
एजेन्सी । दिन पछि रात र रात पछि दिन यो प्राकृतिक नियम नै हो । यस्मा कुनै शंका छैन । , तर यदि केही महिनासम्म रात नपरोस् त ? केवल दिन मात्र होस् कस्तो होला ? के यसको परिकल्पना कहिल्यै गर्नु भएको छ ? रात नभएमा हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि कति बेला सुत्ने र कति बेला उठ्ने भन्ने ।